Taariikhda kulan madaxeedka labada Kuuriya oo la shaaciyey - BBC News Somali
Taariikhda kulan madaxeedka labada Kuuriya oo la shaaciyey
Image caption Saraakiil labada dhinac ka socda ayaa Arbacadii ku heshiiyey goorta iyo goobta
Hogaamiyayaasha labada Kuuriya ayaa 27-ka bisha April qabanaya shirkoodii ugu horreeyay muddo laga joogo toban sano.
War saxaafadeed ay soo saareen labada Kuuriya ayaa sheegaya in wadahadallada dhexmari doona madexweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed Moon-Jae-in lagu qaban doono magaalada ku taalla xaduuda ee Panmunjom.
Waxa lagu dhawaaqay taariikhda uu shirka dhici doono ka dib markii ay kulan yeesheen saraakiil ka socotay labada waddan.
Kulanka dhex mari doona madaxda labada Kuuriya ayaa la shaaciyey ka dib markii uu Mr Kim wadahadal la yeeshay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping.
Kulankaasi oo ka dhacay Beijing ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wuxu ku adkaystay in uu hakin doono hubka nukliyeerka, waxa uuna sidoo kale sheegay in uu bisha May la kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Wafdi balaaran oo ka socda labada dhinac ayaa sheegay in shirka dhex maraya labada waddan uu ka dhici doono hoyga nabadda ee ku yaalla Panmunjom oo ka tirsan Kuuriyada Koonfureed.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda ee dalka Shiinaha Lu Kang, ayaa soo dhaweeyey wadahadalka u dhexeeyo labada Kuuriya, wuxuuna sheegay in ay rajeynayaan in wadaxajoodka uu sii socon doono, lana hirgelin doono nabad waarta.
Wadahadalka dhex mari doona labada Kuuriya ayaa noqonaya tallaabadii ugu dambaysay tan iyo bilowgii sanadka, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ka qayb qaadatay ciyaaraha Olimbikada ee qaboobaha.